Drama | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Drama Drama
Flying Colors [Birigyaru] (2015)
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာ ကျောင်းသူလေး Sayaka Kudo ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်း ကျောင်းပေါင်းစုံ ပြောင်းလဲ တက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို တက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် သူတက်သမျှ ကျောင်းတိုင်းမှာ သူ့အတွက် အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းဆိုတာ မရခဲ့ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန် ဖြစ်နေတဲ့ Sayaka ဟာ သူ့ကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မိခင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မိန်းကလေးသီးသန့် ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းမှာ တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ရလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့သူငယ်ချင်းအုပ်စုဟာ စာကို စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိပဲ အလှအပနဲ့ အပျော်အပျက်တွေမှာသာ မွေ့လျော်နေခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်း ဒုတိယနှစ် (ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အထက်တန်းကို ၃ နှစ် သင်ကြားရသည်) ရောက်လာသည်အထိ Sayaka ဟာ ရည်မှန်းချက်လည်း မရှိသလို ဖြစ်သလို နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Sayaka […]	Read more The Revenant (2015)
ကရကဋ် | Adventure, Drama, Thriller
သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ . . . . ကပ္ပတိန် Andrew Henry တို့အဖွဲ့ဟာ အနီးအနားတဝိုက် တောနက်တွေထဲမှာ သားမွေးတွေ ရရှိရန် အလို့ငှာ အမဲလိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတိုိ့တတွေ ရရှိထားတဲ့ သားမွေးတွေကို ထုတ်ပိုးပြီး ပြန်ဖို့ရာ ပြင်ဆင်နေဆင် ဒေသခံ Arikara လူမျိုးတွေရဲ့ အလစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တချို့သာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အများစုကတော့ အသတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ထိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေထဲမှာမှ Glass ဟာ အမဲလိုက်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ရေမြေဒေသနဲ့ ဒေသခံ တွေအကြောင်း သိရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ Glass ရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့လှေကို စွန့်ခွာပြီး တောထဲမှတစ်ဆင့် သူတို့ စခန်းကို ပြန်ကြပါတော့တယ်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများစုက သဘောမကျ ကြပါဘူး။ Glass မှာ […]	Read more Man, Woman and the Wall (2007)
Hollinaz | Drama, Thriller
Ryo Kawase ဟာ မဂ္ဂဇင်းတိုက်လေးတစ်ခုက စာရေးဆရာ ပေါက်စလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အယ်ဒီတာက ရှာပေးတဲ့ တိုက်ခန်းအသစ်မှာ စတင်အခြေချနေထိုင်ရင်း ရေဆိုးမြောင်းတွေအကြောင်း အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းပြီး ဆောင်းပါးရေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းရဲ့ နံရံဟာ အလွန်ပါးတာကြောင့် တစ်ဖက်အခန်းက အသံတွေကို ကြားနေရပါတယ်။ သူနဲ့ ကပ်လျက်အခန်းမှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးနေထိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ ငယ်ရွယ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ Ryo က ထင်ပါတယ်။ ရည်းစားလည်း မရှိ တကိုယ်တည်း နေထိုင်တဲ့ Ryo အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အချိန်တွေ ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။ အမျိုးသမီး ရေချိုးနေချိန်ဆို တဖက်ခန်းကနေ ကြားနေရတာကြောင့် စိတ်ဝင်တစားတွေ ဖြစ်လာပြီး တဖက်ခန်းက အသံကို Ryo […]	Read more The 33 (2015)
April Outrageous | Adventure, Biography, Drama, History
ချီလေ (Chile) နိုင်ငံရဲ့ ဆန်ဟိုစေး (San Jose Mine) ရွှေနဲ့ကြေးနီသတ္တုတွင်းပြိုကျမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း ချီလေနိုင်ငံသား ၃၂ယောက်နဲ့ ဘိုလီးဗီးယန်းနိုင်ငံသား၁ယောက်ပေါင်း၃၃ယောက်တို့ပါဝင်တဲ့ ဆန်ဟိုစေးမိုင်း ရွှေတူးလုပ်သား အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၀ သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့မှာ ပေပေါင်း ၂၃၀၀ အနက်ကို ရွှေတူးရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပြတ်ရွေ့ စပြုနေတဲ့ မြေအောက် ရွှေတွင်းက အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ ပြိုကျကာ မြေပြင်ကိုပြန်ထွက်နိုင်မဲ့ တစ်ခုထဲသောလမ်းပိတ်သွားပါတယ်။ ပိတ်မိနေတဲ့ လုပ်သား ၃၃ယောက်လုံး စုစုစည်းစည်းရှာတွေ့တဲ့ကာ အုပ်စုခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ မြေပြိုကျတဲ့အခါ ပုန်းအောင်းနေနိုင်ရန်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရလွယ်ကူရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကို သွားကြပါတယ်။ ကုမ္ဗဏီပိုင်ရှင်တွေက ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲကြည့်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ မိုင်းတွင်းဖြစ်နေတာမို့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနေရာရောက်တဲ့အခါ ဆေးပစ္စည်းနဲ့ ရေဒီယိုလဲ မရှိတဲ့အပြင် အပေါ်တက်ဖို့လှေကားကလည်း တ၀က်တပျက် တပ်ဆင်ထားတာ ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ရိက္ခာအဖြစ် မုန့်ခြောက်နဲ့ ငါးသေတ္တာ အနည်းငယ်ပဲ […]	Read more Spare Parts (2015)
ကရကဋ် | Drama
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Mcfarland (2015) နဲ့ ဇာတ်လမ်းချင်းတူညီရုံသာမက အမေရိကန် မက္ကစီကို နယ်စပ်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ။ ထို့အတူ တကယ်အဖြစ်ပျက်ကို ပြန်လည်ရုက်ကူးထားတာလဲ တူညီပါသေးတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းက လူငယ်လေးတွေ စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဝင်ပြိုင်ဖို့ရှိလာပြီး ထိုပြိုင်ပွဲကို အမေရိကန်က တခြားနာမည်ကြီးကျောင်းတွေပါ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ ပထမဆုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ အတွေ့အကြုံမရှိ၊ စက်ရုပ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လုပ်လောက်တဲ့ ငွေကြေးလည်း မရှိပါဘူး။ ထို့အတူ ပြိုင်ပွဲနီးမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေကို လိုက်လံ ခေါ်ယူနေရပါတော့တယ်။ သူတို့အဖွဲ့လေးကို ဦးဆောင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဆရာကတော့ တစ်လောကမှ ကျောင်းကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဆရာအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ ဆရာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိပါဘူး။ ထိုဆရာအနေနဲ့ သူတို့အဖွဲ့လေးကို ဘယ်လိုဦးဆောင်မှုတွေပေးပြီး ရေအောက်စက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ IMDB […]	Read more Movie Guide ! - Close